उपचारमा ढुक्क हुन स्वास्थ्य बिमा- विचार - कान्तिपुर समाचार
उपचारमा ढुक्क हुन स्वास्थ्य बिमा
वैशाख ३१, २०७६ डा. उमाशंकर प्रसाद
स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याउने, स्वास्थ्य समस्याका कारण हुनसक्ने आर्थिक जोखिम घटाउने संयन्त्र हो— स्वास्थ्य बिमा । स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने बृहत् सामाजिक साझेदारीको अवधारणा हो यो ।
आधारभूत, नियमित, प्रतिरोधात्मक, प्रबर्द्धनात्मक, उपचारात्मक, आपत्कालीन र पुनःस्थापना सम्बन्धी सेवाहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत समेटिन्छन् । खरिद गर्ने तरिका बमोजिम स्वास्थ्य बिमा पाँच प्रकारका छन् : सामाजिक, निजी, करमा आधारित, समुदायमा आधारित र मिश्रित ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति, २०७१ ले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्य बिमाका आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ ले यी व्यवस्था गरेको छ— (क) राष्ट्रसेवक र प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने, (ख) नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिलाई बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको अभिभावक वा संरक्षककोकर्तव्य हुनुपर्ने, (ग) स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने प्रयोजनका लागि परिवारलाईएक एकाइ मानिने ।
स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ ले यी व्यवस्था गरेको छ—
(क) प्रति ५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक रु. ३,५००।– प्रिमियम रकम र परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य रु. ७००।–का दरलेथप रकम बुझाउनुपर्ने
(ख) सुविधाको थैलीको सीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा वार्षिक रु. १००,०००।– र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएमा प्रतिथप सदस्य बापत रु. २०,०००।– को सीमा बढ्दै अधिकतम रु. २००,०००।–सम्म हुने
(ग) बिमित सदस्यहरूले वर्षमा एकपटक प्रिमियम बुझाएपछि सेवा क्रियाशील भएपश्चात क्यासलेस प्रणालीमा वर्षभरि सुविधा थैलीको सीमा अनुसार उपचार खर्च पाउने
(घ) बिमित सदस्यले स्वास्थ्यसेवा सबै सरकारीस्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त गर्नुका साथै प्रेषण पुर्जासहित रिफर भई बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरेका आधारमा निजी क्षेत्रका अस्पताल र शिक्षण संस्थाबाट पनि सेवा पाउने
(ङ) कार्यक्रमको सदस्यता वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने
(च) कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा वर्षभरि सदस्यता दर्ता कार्य खुल्ला रहने
(छ) कार्यक्रम सूचना प्रविधि बेसमा सञ्चालित हुने
(ज) मोबाइलबाट फोटो खिची दर्ता सहयोगीले घर–घर गई दर्ता कार्य गर्ने
(झ) प्रचलित कानुन बमोजिम अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त परिवार, अति अशक्त अपांगता, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी भएकाको परिवार तथा सत्तरी वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको प्रिमियमको शतप्रतिशत र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संलग्न भएको परिवारको प्रिमियमको ५० प्रतिशत केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहले बेहोर्ने,
(ञ) सेवाप्रदायकले चौबीसै घण्टा औषधि उपलब्ध गराउनेगरी फार्मेसीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कामकारबाही गर्न नौ जनाको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छ । स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघदेखि स्थानीय तहसम्म १८६ जना पूर्णकालीन कर्मचारी छन् । तीमध्ये ६८ जना स्वास्थ्य मन्क्रालयबाट काजमा आएका हुन् । ३,५०० देखि ४,००० जनासम्म दर्ता सहयोगी छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रमको सदस्यता दर्ता गर्नका लागि गाउंँपालिका/नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा एक–एक जनाका दरले दर्ता सहयोगी छन् । उनीहरू समुदायमा गई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे जानकारी दिई सदस्यता वितरण गर्ने गर्छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नीति अवलम्बन गरी सोही अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने, २०३० अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने तथा २०४३ सम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै सरकारले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयारगरेको छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरूको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ । स्वस्थ नागरिकले आर्थिक विकासमा
टेवा पुर्‍याउने हुनाले स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचतर्फ नेपाललाई सशक्त बनाउँछ ।
स्वास्थ्य बिमा नेपालका सन्दर्भमा नयाँ र चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम हो । यसलाई सफल तुल्याउने दिशामा सबैको समन्वय, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य छ ।
लेखक स्वास्थ्य बिमाबोर्डका अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ०८:०५
सडकको ज्यामिति मिलाए घट्छ दुर्घटना
वैशाख ३१, २०७६ उमेशप्रसाद ओझा
हाम्रो देशमा दिनहुँजसो सडक दुर्घटना भइरहेका छन् । कतै दुर्घटना हुँदा मृतक र घाइतेको संख्या गनेपछि सम्बन्धित निकायको काम सकिएको मानिन्छ । न जनता न सरकार दुर्घटनाको मुख्य कारण र भित्री चुरो पत्ता लगाउनतिर लाग्ने गर्छौं । अचेल देशको हरेक कुनामा बाटो खोल्ने, खन्ने लहड चलेको छ ।
अझ केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा यस विषयमा उछिनपाछिनै चल्ने गरेको छ । सडक र विकास एकअर्काका पर्यायजस्तै भएकाले झलक्क हेर्दा यो अन्यथा नलाग्न सक्छ । अमेरिका लगायत सबै विकसित देशको उन्नतिको रहस्य सडक सञ्जाल नै हो । यसो भन्दैमा आँखा चिम्लेर सडक खन्नु बुद्धिमत्ता होइन । विकट भूगोल भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सडक निर्माण गर्दा निकै होस पुर्‍याउनुपर्छ । वैज्ञानिक हिसाबले बनाइएको सडकले नै कुनै पनि यात्रालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सक्छ ।
सडक दुर्घटना हुँदा सवारी चालक, सवारी साधन र निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष देखाएर पुग्दैन । तिनको पनि दोषी रहेको त असत्य हुन्न, सधैँभरि सत्य पनि नहुन सक्छ । सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण हो— बाटाको ज्यामिति नमिल्नु । पहाडी भूभागमा नयाँ बाटाका लागि जथाभावी ट्र्याक खोल्नु, भू–बनोट विचार नगर्नु, बाटाको ज्यामितीय आकार–प्रकार नमिलाउनु दुर्घटनाका प्रमुख कारक बन्ने गरेका छन् । सडक निर्माण गर्दा सवारी चालक र सवारी साधनको सुरक्षा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी केही भौतिक र ‘भिजुअल एलिमेन्ट’ लाई मिलाउनु जरुरी हुन्छ ।
ज्यामितीय डिजाइन अन्तर्गत वास्तविकतालाई त्रि–आयामिक दृश्य (थ्री डाइमेन्सनल भ्यु) बाट केलाइन्छ । सडकको संरचनात्मक डिजाइन (जस्तै— सबग्रेड, सबबेस र बेस) भन्दा यो फरक हुने गर्छ । ज्यामितीय डिजाइनमा तेर्सो गोलाइ, ठाडो गोलाइ, क्याम्बर, ग्राडियन्टलाई मुख्यतः विचार गरिन्छ । यस्ता–यस्ता ठाउँमा सवारी चालकको मनोविज्ञान, गाडीको गति कस्तो हुनसक्ला भन्ने अड्कल पनि गरिन्छ ।
अहिले स्थानीय निकायमा प्राविधिक जनशक्ति छ । यसलाई परिचालन गरेर जुनसुकै मोडलमा काम गरे पनि पहिलो काम बाटाको ज्यामिति मिलाउनु नै हुनुपर्छ । अनि दुर्घटना घटाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, अधिकांश नयाँ बाटोमा तेर्सो गोलाइ (होराइजन्टल कर्भ) मा सडकको बाहिरी छेउ भित्री छेउभन्दा उचालिएको हुँदैन । अहिले धेरैजसो दुर्घटनायही कारणले हुने गरेका हुन् ।
बाहिरी छेउभित्री छेउभन्दा होचो भइदिनाले गुडिरहेका गाडीहरू बाहिरतिर हुत्तिने गरेका छन् । त्यसैगरी ठाडो गोलाइ (भर्टिकल कर्भ) को वैज्ञानिक डिजाइन नहुनु, बाटोको ग्रेड नमिल्नु, तेर्सो गोलाइ बाटोमा थप चौडा नहुनु गाडी दुर्घटनाका प्रमुख कारण बनिरहेका छन् ।
घुमेको तेर्सो सडकको बाहिरी छेउलाईसडकको भित्री छेउभन्दा अलि अग्लो बनाउन एउटा काठकै टेम्प्लेट पर्याप्त हुन्छ । त्यसैगरी बाटाको ठाडो ग्रेड पनि काठकै टेम्प्लेटबाट मिलाउन सकिन्छ ।
तेर्सो, घुमाउरो र ठाडो बाटोको गोलाइ मिलाउनलाई पनि आधुनिक सर्भे इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिन्न । किला–काँटा, धागो र सामान्य औजारकै सहायताले यो काम गर्न सकिन्छ । धेरै वर्षपहिले एकजना अस्ट्रेलियाली इन्जिनियर एउटा जलविद्युत परियोजनामा जाने बाटो निर्माण गर्न आएका थिए । उनले सामान्य किला–काँटी, धागो, काठको टेम्प्लेट र काठकै सानो गाडीको मोडल तयार गरेर बाटाको ज्यामितीय डिजाइन मिलाएको मलाई अहिले पनि सम्झना छ । यो विधि सामान्य भइकन पनि कति महत्त्वपूर्ण छ, यसबाटै थाहा हुन्छ । सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक ज्ञानमा उतार्नसके नसोचेको उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
नयाँ बनेका हाम्रा सबै सडक अवैज्ञानिक छैनन् । कतिपय पहाडी बाटा ज्यामिति मिलाएरै बनाइएका छन् । तिनमा दुर्घटना पनि कमै भएको पाइन्छ । त्यस्ता बाटामा सवारी चालकको मनोविज्ञान ठीक रहने, डिजाइनकै गतिमा गाडी गुड्न पाउने हुन्छ । बाटाको ज्यामिति मिल्नु भनेको सडक प्रयोगकर्ता, सवारी चालक र सवारी साधन सबैको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु हो ।
दुर्घटनाको अर्को कारण हो— सडक भारवहन क्षमता र भू–बनोट कमजोर हुनु। भारवहन क्षमता थोरै भएको सडकमा बडेबडे सवारी साधन चल्दा दुर्घटना निम्तिने सम्भावना प्रबल हुन्छ नै । त्यस्तै अनुशासनहीन सवारी चालक, थोत्रा सवारी साधनका कारण पनि दुर्घटना निम्तिने गरेका छन् । सडक हेर्ने सरकारी निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पालना गर्नैपर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के बिर्सनुहुन्न भने, ज्यामिति मिलेको ग्राभेल सडक ज्यामिति नमिलेको कालोपत्रे सडकभन्दा सुरक्षित हुन्छ ।
लेखक इन्जिनियर हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ०८:००